Fihaonambe any Paris: Manao Ezaka Manokana ny Vavolombelon’i Jehovah
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Catalan Cebuano Chichewa Chol Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Haoussa Hebreo Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Javaney Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Ourdou Pendjabi Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tarasque Tatar Tiorka Tseky Valencienne Vietnamianina Yorobà
Natao tamin’ny 30 Novambra ka hatramin’ny 12 Desambra 2015 ny Fihaonamben’ny Firenena Mikambana Momba ny Fiovan’ny Toetrandro. Solontena avy any amin’ny tany 195 no nivory tany Paris, any Frantsa, mba handinika an’izay azo atao mba tsy hisy vokany be amin’ny toetrandro ny ataon’ny olona. Efa ho 38 000 no nanatrika an’ilay fihaonambe, anisan’izany ny mpitondra fanjakana, mpahay siansa, mpiaro ny tontolo iainana, ary mpandraharaha. An’aliny koa no nitsidika an’ilay toerana ahafahan’ny besinimaro mahazo fanazavana momba ny fiovan’ny toetrandro, teo akaiky teo.
Mahaliana ny Vavolombelon’i Jehovah koa ny momba ny tontolo iainana na dia tsy nandray anjara tamin’ilay fihaonambe aza izy ireo. An-jatony tamin’izy ireo no nanao ezaka manokana tany Paris mba hampahafantarana ny olona fa tsy haloto intsony ny tontolo iainana, araka ny ampanantenain’ny Baiboly.
Nandeha fiara fitateram-bahoaka ny Vavolombelon’i Jehovah iray ary niresaka tamin’ny lehilahy avy any Peroa, manao akanjo perovianina. Nanazava ilay lehilahy fa na dia salama tsara sy mipetraka any amin’ny tendrombohitra tsara tarehy aza izy, dia mbola mampahatahotra azy ihany hoe hanao ahoana ity tany ity. Faly be izy rehefa nahalala an’izay ampanantenain’ny Baiboly, ary nitsikitsiky be izy rehefa nandray an’ilay karatra mampahafantatra azy ny tranonkalanay, www.jw.org.
Niresaka tamin’ny Amerikanina iray mpandalina momba ny tontolo iainana ny Vavolombelon’i Jehovah roa rehefa nandeha lamasinina. Gaga be ilay rangahy rehefa nahafantatra hoe indroa ny Vavolombelon’i Jehovah no nahazo mari-pankasitrahana Four Green Globes, avy tamin’ny Green Building Initiative, noho izy ireo tia miaro ny tontolo iainana. Ireo trano roa naorina tany Wallkill, any New York, no nahazoan’izy ireo an’ireo mari-pankasitrahana ireo. Nataon’izy ireo tsy manimba ny tontolo iainana mantsy ny paozin’ireo tranon’ny biraon’ny sampan’ny Vavolombelon’i Jehovah any Etazonia ireo sy ny fomba nanorenana azy. Faly nandray karatra jw.org koa ilay rangahy.
Maro no niaiky hoe tena tia miaro ny tontolo iainana ny Vavolombelon’i Jehovah ka nampanantena fa hitsidika ny tranonkalanay. Avy any Kanada, ohatra, ny vehivavy iray nanatrika an’ilay fihaonambe ary henony hoe niezaka niaro ny toerana fanatodizan’ny karazam-borona iray ny Vavolombelon’i Jehovah rehefa nanorina ny foibeny vaovao any Warwick, any New York. Hoy izy: “Manam-pahaizana momba ny vorona aho fa mpiaro ny tontolo iainana aho izao. Tsy fantatro mihitsy hoe tena manaja ny tontolo iainana ny Vavolombelon’i Jehovah. Hiezaka aho izao hamaky ny bokinareo sy hijery ny tranonkalanareo mba hahafantarako tsara ny momba anareo.”